ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလောက်ရိုင်းရသလား – Nyang Media
SNLD / နမ္မတူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခမ်းအေး
ကျွန်တော်တို့အလုပ်က ဘာလဲဆိုတာသိလား” တဲ့၊ ကျွန်မက “ မသိပါဘူး” လို့ဆိုတော့ ဒုဝန်ကြီးက “ ကျွန်တော်တို့က အုပ်ချုပ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနေတာ၊ အောက်ခြေကခွေးတွေကို ဆင်းကြည့်နေစရာမလိုဘူး” လို့ ပြောလိုက်တာ။ ကျွန်မလည်း …
စက်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၁) ရက်မြောက်နေ့ တွင် နမ္မတူမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခမ်းအေး တင်ပြခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီး၏ ပြောစကားနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်နန်းခမ်းအေးကို ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်း ထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – စက်တင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့က လွှတ်တော်မှာ ဒေါ်နန်းခမ်းအေး တင်ပြခဲ့တဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုဝန်ကြီးရဲ့ ပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေအနေအဖြစ်အပျက်ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။
DNKA – အဲဒီစကားကို သူက လွှတ်တော်ထဲမှာပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မနဲ့ မိုင်းကိုင်ကိုယ်စားလှယ် သူ့ကိုသွားတွေ့ တုန်းက ပြောတာ။ (၁၉ . ၉ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့က ပြောခဲ့တာပါ။ ပြောရရင် အဲဒီတုန်းက ကျွန်မတို့ဒေသမှာ တောင်ပြိုပြီး ရေတွေ ပိတ်သွားတော့ လယ်တွေရေမရဘဲ ပတ်ကြားအက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ တောင်သူတွေက အခြေအနေတွေကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပို့ပြီး ကျွန်မကိုပြောပြကြတယ်။ ကျွန်မက ဘာလို့စောစောမပြောတာလဲပေါ့၊ ဒီနေ့တောင် ကျွန်မတို့လွှတ်တော် ပိတ်ပြီဆိုတော့ သူတို့ ဆည်မြောင်းကိုပြောတာ ချက်ချင်းရေလာဖွင့်ပေးပါမယ်ပြောပြီး တစ်ပတ်ကျော်တဲ့အထိ ရောက်မလာလို့တဲ့၊ အဲဒါ ရေမြန်မြန် ရအောင် လုပ်ပေးပါဦးတဲ့၊ သူတို့ဆည်မြောင်းက လာရင်လည်း စက်ကတော်တော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်တော့ စပါးပင်တွေ သေကုန် လိမ့်မယ် တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မက ဝန်ကြီးရုံးကိုဖုန်းဆက်ပြီး ကျွန်မဒေသမှာ အရေးပေါ်အခုလိုဖြစ်နေလို့ ဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ချင် ပါတယ်လို့ပြောတော့ ဝန်ကြီးကနိုင်ငံခြားသွားနေလို့ ဒုဝန်ကြီးပဲရှိတယ်၊ လာတွေ့ပါတဲ့။ ဆိုတော့ ကျွန်မက ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက် အထောက်အထားတွေယူပြီး သွားတွေ့ခဲ့တာ။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ အဲဒီလိုသွားဖို့ မိုင်းကိုင်က ကိုယ်စားလှယ်ကို ကျွန်မအဖော်ခေါ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့သွားတော့ အဲဒီမှာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက (၃) ယောက်လောက်ခေါ်ထားတယ်။
ဒီဆည်မြောင်းကိစ္စကို အတွင်းဝန်နဲ့ သွားတွေ့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ ခင်ဗျားအဲဒီကိုသွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုမကျေနပ်ဘူး။ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို လွှတ်တော်မှာအကျပ်ရိုက်အောင်မေးခွန်းမေးတယ်။ တကယ် …
ကျွန်မတို့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်က (၃) နာရီဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့က မုန်တိုင်းရှိလို့ဆိုပြီး မိုးကရွာရောလေ။ ကျွန်မက မြေပြင်မှာ ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာ ပြောပြတော့ “ အခုမိုးရွာနေတယ်လေ” တဲ့။ ကျွန်မက ဒီမနက်မှရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုပြတယ်၊ မြေတွေပတ်ကြားအက်နေတာတွေကိုပြတယ်၊ အခြေအနေကိုပြောပြတယ်။ ခုညနေမှ မိုးရွာတာတော့ မုန်တိုင်းရှိလို့ ရာသီဥတုက ကောက်ကာငင်ကာရွာတာလေ။ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်မက ပြောပြတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ လွဲမှားတာတွေရှိတယ်၊ များသောအားဖြင့် လွှတ်တော်မှာ ကျွန်မမေးခွန်းတွေကိုဖြေသွားတဲ့အထဲမှာလည်း လွဲမှားတာတွေရှိတော့ အောက်ခြေကို ကွင်းဆင်းကြည့်သင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်မကအကြံပြုလိုက်တယ်။ ကျွန်မအဲဒီလိုအကြံပြုတော့ ဒုဝန်ကြီးက “ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က ဘာလဲဆိုတာသိလား” တဲ့၊ ကျွန်မက “ မသိပါဘူး” လို့ဆိုတော့ ဒုဝန်ကြီးက “ ကျွန်တော်တို့က အုပ်ချုပ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနေတာ၊ အောက်ခြေကခွေးတွေကို ဆင်းကြည့်နေစရာမလိုဘူး” လို့ ပြောလိုက်တာ။ ကျွန်မလည်း သူအဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ အံ့သြသွားတယ်။ သူကစိတ်တိုပြီး ဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ ” ကျွန်တော်တို့အဆင့်က ခင်ဗျားအခုလိုလာပြီး တိုက်ရိုက်တွေ့လို့ရတယ်ထင်သလား၊ ခင်ဗျားယူခဲ့တဲ့စာတွေလည်း ကျွန်တော့်ဆီတိုက်ရိုက်ရောက်စရာမလိုဘူး” လို့ပြောပြီး စာတွေကို စားပွဲပေါ်ပစ်ပေါက်လိုက်တာ။ သူဆိုလိုချင်တာက Register လုပ်ပြီးမှ လာရမယ်ပေါ့။ တကယ်တော့ သူတို့ကရုံးမှာလာတွေ့ဆိုလို့ ကျွန်မတို့က သွားတွေ့တာလေ။ ဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း သူပစ်ပေါက်လိုက်တဲ့စာတွေကို ပြန်ယူမလို့လုပ်တော့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်က “ ကျွန်တော်ယူမယ် ကျွန်တော် ယူမယ်” ဆိုပြီး ဆွဲယူပြီးချက်ချင်းအပြင်ထွက်သွားတာ။ အဲဒီမှာသူက ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဝန်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး ပြောတယ်။ ပြီးတော့ “ ဒီဆည်မြောင်းကိစ္စကို အတွင်းဝန်နဲ့ သွားတွေ့လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ထားတယ်။ ခင်ဗျားအဲဒီကိုသွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကိုမကျေနပ်ဘူး။ ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို လွှတ်တော်မှာအကျပ်ရိုက်အောင်မေးခွန်းမေးတယ်။ တကယ်ဆို ခင်ဗျား အဲဒီလို အကျပ်ရိုက်အောင် မေးစရာမလိုဘူး။ ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကို Power Point မှာထိုးပြလိုက်ပြီးတောင်းရင် ကျွန်တော် ချက်ချင်းပေးမှာပေါ့” တဲ့။ သူကပြောတာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သဘောပေါက်သွားတယ်။ သူ ကျွန်မမေးခွန်းကို မဖြေနိုင်လို့ သူ့အနေနဲ့ အရှက်ရတယ်လို့ သူခံယူထားမှာပေါ့နော်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်မအမြင်က အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။
ဘုရင်ဆိုတာ ပုလ္လင်ပေါ်မှာပဲနေရတယ်။ အောက်ခြေကခွေးတွေကို သွားကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောတာပါ” တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မက …
ကျွန်မတို့က မှန်တာကိုထောက်ပြရင် အဖြေမှန်ရအောင် ဘယ်အနားကွဲလွဲနေသလဲဆိုတာ ရှာရမယ်။ ဒါ သူတို့အလုပ်။ ခုကျတော့ လွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးတာကို သူကစိတ်ထဲမှာ အငြိုးထားပြီးပြောတယ်ဆိုတာ ကျွန်မသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မ လည်းပြောလိုက်တယ်။ ” ခင်ဗျားက ပြည်ထောင်စုအဆင့် ဒုဝန်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီလောက် ရိုင်းရသလား၊ ကျွန်မ မထင်ထား ဘူး။ စာတွေကို ပစ်ပေါက်တာတွေ၊ ခွေးနဲ့နှိုင်းပြောတာတွေ။ ကျွန်မတို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ အုပ်ချုပ်ရေးက ဘာလုပ်သလဲဆိုတာကို အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းရတာ။ ခုနက ခင်ဗျားပြောတဲ့ ရှမ်းပြည်အတွင်းဝန် ဆီကိုလည်း ကျွန်မ မသွားနိုင် ဘူး။ သွားရင် စီမံခန့်ခွဲတဲ့အပိုင်းကို ဝင်စွက်ဖက်ရာရောက်မယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဆိုတာ ဟိုဟာလေး ပေးပါဦး၊ ဒီဟာလေးပေးပါဦးဆိုပြီး တောင်းရအောင် သူတောင်းစားမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြောလိုက်တယ်။ တကယ်လည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုလိုအပ်ချက်ရှိနေပြီ၊ ဘာလို့မလုပ်တာလဲ ဆိုပြီး ထိန်းကျောင်း တာပဲရှိတာလေ။ ကျွန်မ အဲဒီလိုပြောလိုက်မှ သူက ကျွန်မကိုတောင်းပန်တယ်။ ” ဟာ ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက ဘုရင်ဆိုတာ ပုလ္လင်ပေါ်မှာပဲနေရတယ်။ အောက်ခြေကခွေးတွေကို သွားကြည့်စရာမလိုဘူးဆိုပြီး ကျွန်တော်ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောတာပါ” တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်မက ” ကျွန်မတို့မှာတော့ ဒါမျိုးစကားပုံမရှိဘူး၊ ခင်ဗျားတို့မှာရှိနေရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး” လို့ ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒါဟာ (၁၉ . ၉ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့က ဖြစ်ခဲ့တာ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့။
ဝန်ကြီး တစ်ယောက်ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်မှာတင်ပြရမှာလေ။ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြပြီး မဲခွဲမယ် ဘာညာဆိုတာ ဆောင်ရွက်ရအောင် အဲဒီအချိန်က လွှတ်တော်ကလည်း ပိတ်နေပြီ။ အဲဒါကြောင့် …
ငြမ်းမီဒီယာ – ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေကို အသိပေးတာမျိုး အဲဒီတုန်းက မလုပ်ခဲ့ဘူးလား။
DNKA – လုပ်တာပေါ့။ ဒီကိစ္စကို (၂၆ . ၉ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့မှာ သမ္မတဆီ ကျွန်မစာတင်လိုက်တယ်။ ဝန်ကြီးဆိုတာ သမ္မတကို တာဝန်ခံရတယ်လေ။ အဲဒီတော့ ဒုဝန်ကြီးဆိုတာ ဝန်ကြီးကိုတာဝန်ခံရသလို သမ္မတကိုလည်း တာဝန်ခံရတာပဲလေ။ ဝန်ကြီး တစ်ယောက်ကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်မှာတင်ပြရမှာလေ။ လွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီး မဲခွဲမယ် ဘာညာဆိုတာ ဆောင်ရွက်ရအောင် အဲဒီအချိန်က လွှတ်တော်ကလည်း ပိတ်နေပြီ။ အဲဒါကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးဒုဝန်ကြီး ဦးလှကျော်ကို လိုအပ်သလို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ဆိုပြီး သမ္မတဆီကိုစာတင်လိုက်တာ။ ကျွန်မသဘောက ပါတီစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ လုံးဝမရှိဘူး။ ကျွန်မတို့ပါတီ အစည်းအဝေးလုပ်လို့ ကိုယ့်ပါတီကလူ မကောင်းရင်တောင် ကျွန်မကပြတ်ပြတ်သားသား ဝေဖန်တယ်။ ကျွန်မက အဲဒီလိုလူမျိုး။ အခုကျွန်မက သူပြောတဲ့စကားကိုပဲ ပြန်တင်ပြတာ။ သူ့ဘက်က ခွေးနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောသွားတာ။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် သမ္မတကိုလည်း ပြည်သူကရွေးချယ်ထားတဲ့သမ္မတဆိုပြီး အလေးထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပြီး ကျွန်မစာတင်တာလေ။ သမ္မတက အဲဒီစာဖတ်ရတယ် မဖတ်ရဘူးဆိုတာတော့ မသိဘူးပေါ့။ ကျွန်မဒီလို လွှတ်တော်ထဲပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၊ ဒါကို သမ္မတပြန်ကြားရင် သူ့ကိုတာဝန်ခံထားတဲ့ ဒုဝန်ကြီးလေ။ ဟုတ်တယ်မလား။ ဒါကိုသမ္မတကြားရင် ဘယ်လို Action ယူမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်ထိ အရေးယူသလား မယူသလားဆိုတာ ဘာမှမသိရ မကြားရဘူး။ နောက်ပြီး လွှတ်တော် side ဘက်ကလည်း ဒုဝန်ကြီးတစ်ယောက်က ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကို ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သူတို့စုံစမ်းသင့်တယ်။ လောလောဆယ် ဘာမှမသိရသေးတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ ကွဲလွဲချက်တွေ၊ မပြေလည်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို တိတိကျကျလေးရှင်းပြပေးပါဦး။
DNKA – ဒီကိစ္စကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကျွန်မ မေးခွန်းမေးခဲ့တယ်။ အမှန်ဆို အဲဒီမြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းကိစ္စကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ကျွန်မပြောခဲ့လို့ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ကုမ္ပဏီ ဘက်ကမှားတယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားတယ်။ အဲဒီလိုသိသွားတော့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး မြေပြင်မှာကွင်းဆင်းတိုင်းတာတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီ ဘက်က မစိုက်ပျိုးရသေးတဲ့အကွက်တွေ တွေ့တဲ့အကြောင်း၊ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ဒီမြေတွေကို ကုမ္ပဏီဆီက ပြန်သိမ်း ရတော့မယ့် အကြောင်း မြေစာရင်းဌာနက ကျွန်မကိုပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ မြေပြန်သိမ်းခံရမှာစိုးလို့ စိုက်လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်၊ လူကြီးတွေလာခါနီးကျမှ အဲဒီအကွက်တွေမှာ ရော်ဘာတွေ စိုက်လိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေထွက်မယ်လည်းဆိုရော ကျွန်မကပြောတယ်၊ ဥပဒေအတိုင်း မစိုက်ပျိုးရင် အဲဒီမြေတွေ ပြန်သိမ်းပြီး တောင်သူ တွေကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတာ အဲဒီ ၂၀၁၃ ကတည်းက ကျွန်မပြောခဲ့တာပဲ။ သိမ်းမယ်လို့ သူတို့ပြောခဲ့ပေမယ့် သိမ်းသလား မသိမ်း သလား ကျွန်မလည်းမသိဘူး။ ၂၀၁၈ မှာ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း ဥပဒေထွက်လာတော့ ဒီမြေတွေကို လုပ်ကိုင်ဖို့ မလျှောက်ကြ ဘူးလားလို့ ကျွန်မက တောင်သူတွေကိုမေးတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့က လျောက်ပေမယ့် မကျဘူးလို့ပြောကြတယ်။
ကျွန်မတို့တင်ပြတဲ့အကွက်နဲ့ ပြန်သိမ်းတဲ့အကွက်က လွဲနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒါဘာကြောင့်လွဲသလဲဆိုတာ ဒီတစ်ကြိမ်ထပ် မေးလိုက် တာ။ လွဲနေရင် လွဲတဲ့အကြောင်း တိတိကျကျဖော်ပြရမယ်လေ။ ဒါက အဂတိနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ချင် သက်ဆိုင်နိုင်တယ် …
ဒါနဲ့ ကျွန်မက လျောက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပြပါဦး၊ အဲဒီစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာမှာ သွားမေးကြည့်ရမှာဆိုတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်က ဗဟိုမြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေးဆီတင်ထားတဲ့၊ တံဆိပ်နှိပ်ထားတဲ့ စာရွက်ကိုပေးတယ်။ ကျွန်မ ကလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲယူပြီး အပေါ်ကိုတင်ပြတာ။ အဲဒီစာရွက်ထဲကအတိုင်း ကူးပြီး ဒီမြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်ပေး မလဲဆိုတာ ကြယ်ပွင့်မပြမေးခွန်း မေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်း စီမံခန့်ခွဲရေးကိုလည်း ကျွန်မရှင်း ပြတယ်။ ဒါတွေကိုပြန်မသိမ်းဘဲ ကြာနေရင် တောင်သူတွေက ဝင်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါ ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး တောင်သူတွေ အပြစ်ဖြစ်မှာ ကျွန်မစိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့က ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ စာရေးပြီးတင်ပါဆိုလို့ ကျွန်မလည်း စာရေးပြီးတင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလိုစာရေးတင်ပြီး တစ်လအကြာမှာ “ ပြန်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါကြောင်း” ဆိုတဲ့စာကို ကျွန်မဆီပို့ တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့တင်ပြတဲ့အကွက်နဲ့ ပြန်သိမ်းတဲ့အကွက်က လွဲနေတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒါဘာကြောင့်လွဲသလဲဆိုတာ ဒီတစ်ကြိမ်ထပ် မေးလိုက် တာ။ လွဲနေရင် လွဲတဲ့အကြောင်း တိတိကျကျဖော်ပြရမယ်လေ။ ဒါက အဂတိနဲ့လည်း သက်ဆိုင်ချင် သက်ဆိုင်နိုင်တယ် ဆိုပြီးပေါ့။ မေးလိုက်တော့ သူကပြောတယ်၊ ဒီကုမ္ပဏီကိုချပေးတုန်းက ရွာနဲ့ ဘယ်နှမိုင်ကွာဝေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက် မပါခဲ့ဘူးပေါ့။ ကျွန်မက အဲဒါဆို ကုမ္ပဏီကိုချပေးထားတဲ့ စာရွက်ကိုယူခဲ့၊ အခုလက်ရှိမြေပုံနဲ့ထပ်လိုက်ရင် ဘယ်သူ ဘယ် လောက် ကျူးသလဲဆိုတဲ့ အဖြေ ချက်ချင်းထွက်မယ်လေ။ အဲဒါကို မလုပ်ဘဲ ဒုဝန်ကြီးက ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖြေရှင်းပြီး ပါပြီ ဆိုပြီး ဒီမှာ Power Point ထိုးလိုက်တာ။ အဲဒီမှာရိုက်ထားတာ နောက်ကျောပေးထားတဲ့ပုံက ကျွန်မပုံဖြစ်နေတယ်လေ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်နဲ့ရှင်းပြီးပါပြီဆိုတော့၊ အဲဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ကျွန်မဖြစ်နေတာလေ။ ကဲ။ အဲဒီတော့ ဒီမြေကိစ္စက ဖြစ်နေခဲ့ တာကြာပြီ။ ကျွန်မကိုယ်စားလှယ်တာဝန် စထမ်းဆောင်ကတည်းက မေးခွန်းတစ်ခါမေးတယ်။ မေးတော့ အရင်အနားယူ သွားတဲ့ ဒုဝန်ကြီးက ဒီကိစ္စကို အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဆိုတာ ကတိကဝတ်ပုံစံမျိုးပြော သွား တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ မလုပ်လို့ အဲဒီစာရွက်ကိုသူတို့ရုံးကိုယူသွားပြီး ပြတဲ့အခါ အခုလက်ရှိဒုဝန်ကြီးက “ ဟာ ဒါကတိကဝတ်ကြီးပဲ” လို့ထအော်တာ။ ကျွန်မတို့မှာအဲဒီလို ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီး ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မက ဒီလိုမရှင်းပြဘဲ ခုနကမေးတာကိုပဲ ဖြေမယ်ဆိုရင် မီဒီယာသမားတွေလည်း ဒီကိစ္စကို သေသေချာချာမသိနိုင်ဘူးလေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရှမ်းပြည်နယ်မှာ အခုလို မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပြဿနာတွေကို ဘာကြောင့် ဖြေရှင်းရ ခက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခု မှတ်ချက်ပြုချင်တာများရှိပါသလား။
DNKA – တချို့ကိစ္စတွေမှာ ကျွန်မတို့က မြေပြင်ကိုကွင်းဆင်းတယ်။ ကာယကံရှင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာသက်သေတွေကို ကျွန်မတို့က ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့တယ်။ အချက်အလက်တွေယူတယ်။ ယူပြီးမှ ကျွန်မတို့က သဘောထားမှတ်ချက် ရေးလိုက်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ တစ်ခါတလေ ခရိုင်က အဲဒီစာကို ပြင်လိုက်တာတွေရှိတယ်။ ဒါရှမ်းပြည်မှာဖြစ်နေတာ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ သဘောထား မှတ်ချက်နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီးတော့၊ ပြောင်းလဲပြီးတော့ အထက်ကို သူတို့ ပြန်ရေးတင်တာတွေရှိနေတာ။ ဒါဖြစ်သင့်သလား။ နောက် သမ္မတကနေပြီး ဒီမြေယာနဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာလုပ်သင့်တယ်၊ ညာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ (၅၂) ချက်ကိုအမြဲလွင့်နေတာ။
တပ်သိမ်းမြေတွေလည်း အဲဒီမှာ အများကြီး ရှိနေတယ်။ ရှမ်းတောင်ပိုင်းက ဝမ်တိန်းဆိုတာကို ကျွန်မရောက်တော့ အဲဒီမှာ တပ်သိမ်းမြေအပြင် တခြားမြေယာ ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ မရှင်းနိုင်ဘူး။ ဒါ …
ကျွန်မတို့ ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံတော့ အဲဒီမြေယာကိစ္စ ဒီလိုပြဿ နာရှိတယ်ဆိုတော့ သူတို့ကဘာပြောလဲ၊ ဟာ သမ္မတရဲ့ သဘောထား မှတ်ချက်အတိုင်းကိုင်ပါလားတဲ့။ ရှမ်းပြည်မှာ သွားကိုင်ကြည့်လေလို့ ကျွန်မပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မနမ္မတူ မြို့နယ်နားက နားဆိုင်း မှာ မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြဿ နာ (၄) ခုရှိတယ်။ တစ်ခုမှ အခုထိမပြတ်ဘူး။ အဲဒီမြေယာ ပြဿနာ တွေ ကို ကျွန်မတို့ရေးပြီး တင်ပြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိမပြတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ သမ္မတရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ဆိုတာ အကျိုး သက်ရောက် မှု ရှိသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်မနေဘူးလား။ ဒါတကယ့်မြေပြင်အခြေအနေနော်။ ကျွန်မတို့နမ္မတူမှာကျတော့ သူကနယ်မြေ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ လက်နက်ကိုင်တွေ အရမ်းများတယ်။ ၂၀၁၆ ကနေ ၂၀၁၈ ဇွန်လအထိဆိုရင် တိုက်ပွဲပေါင်းက (၉၀) လောက်ရှိတာ။ အဲဒီလို တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင် တိုက်ပွဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဗုံးတွေ ဘာတွေညာတွေ မိုင်းတွေလည်း ရှိတတ်တယ်လေ။ မပေါက်ကွဲသေး တဲ့ ဟာတွေပေါ့။ အဲဒီတော့ တောင်သူတွေသွားရင် နင်းမိတာတို့၊ ကျွဲနွားတွေသွားရင်နင်းမိတာတို့ အဲဒါမျိုးရှိတယ်။ အဲဒီတော့ မြေစာရင်း ကလည်း ဆင်းပြီးမတိုင်းရဲဘူး။ အဲဒီမတိုင်ခင်က တိုင်းခိုင်းတော့လည်း စက်ကမလုံလောက်ဘူး။ နိုင်ငံတော်က စိုက်ပျိုးရေး နိုင်ငံတော့ ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြေယာတိုင်းထွာဖို့ စက်အလုံအလောက်မရှိတဲ့အခါ သူတို့က နောင်ချိုဘက်ကို ဦးစားပေးပြီး ဆင်းတိုင်း နေရတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မတိုင်းရတာတွေရှိတယ်။ အဲဒီလိုအားနည်းချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဥပဒေထဲမှာ ပါထား တာကျတော့ အကယ်၍ မြေပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုရင် ဘာမှစာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားမရှိရင်တောင်မှ ရပ်ရွာက သက်သေ တွေနဲ့ ပြလို့ ရပါတယ် ဆိုတာ ပြောတော့ ပြောထားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြေပြင် အခြေအနေအရ ဆင်းပြီး မတိုင်းထွာနိုင်တဲ့ အခါမှာ အဲဒီဟာက ပြဿနာသွားဖြစ် နေတယ်။ ဆင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကကျတော့လည်း နောင်ချိုဘက်ကို ဦးစားပေးသွားနေရတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်နေတာ။ ကျွန်မဒေသမှာ အဲဒီလိုမတိုင်းတာနိုင်တာတွေ၊ စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားမရတာတွေ အများကြီးရှိ နေတော့ မြေယာပြဿ နာတွေ မပြီးမပြတ်နိုင်ဖြစ်ရတာပေါ့။ ရှမ်းတောင်ဘက်က တချို့ဒေသတွေမှာကျတော့ ဥပဒေက သူ့ဟာနဲ့သူ ထွက်နေ ပေမယ့် မြေပြင်မှာ အဲဒီဥပဒေက မလွှမ်းမိုးနိုင်တာမျိုးတွေ ရှိပြန်ရော။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ တပ်သိမ်းမြေတွေလည်း အဲဒီမှာ အများကြီး ရှိနေတယ်။ ရှမ်းတောင်ပိုင်းက ဝမ်တိန်းဆိုတာကို ကျွန်မရောက်တော့ အဲဒီမှာ တပ်သိမ်းမြေအပြင် တခြားမြေယာ ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ မရှင်းနိုင်ဘူး။ ဒါ ကျွန်မရောက်တဲ့ဒေသကို အခုရုတ်တရက်မှတ်မိသလောက်ပြောပြတာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ဥပဒေတွေက ထုတ်တာတော့ထုတ်နေတယ်၊ မြေပြင်မှာ အခြေအနေအရ မလိုက်နာနိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။
အဖွားကြီးတစ်ယောက်က ခံပြောတာ။ အဲဒီလို ခံပြောလို့ဆိုပြီး အဲဒီအဖွားကြီးကို ကုမ္ပဏီက လည်ပင်းမှာနိုင်လွန်ကြိုးတွေစွပ်ပြီး လမ်းမှာတောက်လျောက်ဆွဲတာ …
ငြမ်းမီဒီယာ – စက်တင်ဘာ (၁၆) ရက်နေ့က လွှတ်တော်မှာ စိုက်ပျိုးရေးဒုဝန်ကြီး ပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားသွားတာကိုရော စိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါသလား။
DNKA – အဲဒီနေ့ကတည်းက လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကျွန်မကိုမေးတယ်လေ၊ နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်း မေးစရာရှိသေးလားဆိုတာ၊ အဖြေမှန်ရနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုပဲတင်ပြလိုက်ပါတယ်လို့ ကျွန်မပြောခဲ့တာပဲလေ။ ဒါ ကျွန်မသဘောထားပဲ။
အဖွားကြီးရဲ့ယောကျ်ားက ဝင်ပြောတော့ ပုလင်းကိုရိုက်ခွဲပြီး ပုလင်းကွဲနဲ့ အဖိုးကြီးရဲ့ခြေသလုံးတွေကိုထိုးတာ အဖိုးကြီးတောင် ဆေးရုံတက်ကုလိုက်ရတယ်။ အဲဒါ …
ပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီး ဒီ T&C ကုမ္ပဏီကို မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊ မြေရိုင်းတွေကို ချပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုချပေး လိုက်တော့ ပြောင်းဖူးတွေ နှမ်းတွေစိုက်နေတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့မြေတွေပေါ်မှာ ကုမ္ပဏီက အလံနီတွေလာစိုက်တာ၊ အဲဒီမှာ ခြံသမားတွေက ဒီအလံနီတွေ ဘာလို့ငါတို့ခြံထဲရောက်နေလဲဆိုပြီး ဖြစ်ရော။ အဲဒီတော့ သူတို့ကဘယ်သူလာစိုက်မှန်းလဲ မသိတော့ နှုတ်ပစ်တယ်။ နောက်နေ့ထပ်လာစိုက်တော့ အဲဒီစိုက်တဲ့သူကိုမေးတော့ နိုင်ငံတော်က ဒီမြေတွေသူတို့ကိုပေးတာလို့ပြောတယ်။ တောင်သူတွေကလည်း သူတို့လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့မြေတွေပါ ဖြစ်ရော။ အဲဒီမှာ ပြဿ နာဖြစ်တာ။ ဖြစ်တော့ အဲဒီရွာမှာ ဒေါ်နန်းမြအိမ်လား ဒေါ်နန်းရွှေအိမ်လား ကျွန်မသူ့နာမည်သေသေချာချာမမှတ်မိလို့၊ အဲဒီအဖွားကြီးတစ်ယောက်က ခံပြောတာ။ အဲဒီလို ခံပြောလို့ဆိုပြီး အဲဒီအဖွားကြီးကို ကုမ္ပဏီက လည်ပင်းမှာနိုင်လွန်ကြိုးတွေစွပ်ပြီး လမ်းမှာတောက်လျောက်ဆွဲတာ။ ၂၀၀၉ တုန်းက။ အဖွားကြီးရဲ့ယောကျ်ားက ဝင်ပြောတော့ ပုလင်းကိုရိုက်ခွဲပြီး ပုလင်းကွဲနဲ့ အဖိုးကြီးရဲ့ခြေသလုံးတွေကိုထိုးတာ အဖိုးကြီးတောင် ဆေးရုံတက်ကုလိုက်ရတယ်။ အဲဒါ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက။ အဲဒီလိုပြဿ နာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် ဝန်ကြီးပြောသလို ရွာနဲ့ ဘယ်နှ မိုင် ဝေးပါတယ် ဆိုတာထက် လုပ်သင့်တာက မြေပုံအတိုင်း မင်းတို့လိုသလောက်ပေးထားတာပဲ၊ ရွာကတော့ဒီလောက်ပဲ၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်သူမှားသလဲ မှန်သလဲ အဖြေချက်ချင်းထွက်တယ်။ ဒီလိုမှန်ကန်မြန်ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းကို ဘာလို့မသုံးချင်သလဲ။
ပြည်သူတွေကလည်း အရမ်းခက်ခဲကြပ်တည်းနေကြပြီ။ တချို့ကလည်း လျော်ကြေးပဲယူတော့မယ် ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အဲဒီမှာ ငွေယူမယ့်အဖွဲ့နဲ့ မြေယူမယ့်အဖွဲ့ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ …
ဟုတ်တယ် နော်။ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကို ဘာလို့အမြန်မဖြေရှင်းဘဲ အချိန်ဆွဲသွားနေသလဲ။ နောက်ပြီး ၂၀၁၃ လား ၂၀၁၄ လားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီသူတို့သိမ်းလိုက်တဲ့မြေထဲမှာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ကို တရားစွဲ ရော။အဲဒီတော့ ကျွန်မက တောင်သူတွေကိုပြောတယ်၊ ဒီတစ်ယောက်ကို တရားစွဲတာရှုံးရင် မင်းတို့အကုန်ရှုံးလိမ့်မယ်၊ ကူးစက် ရောဂါလိုပဲ။ အားလုံးဝန်းရံရမယ်ဆိုပြီး တရားရုံးကို အယောက်တစ်ရာကျော် သွားဝန်းရံကြတယ်။ နမ္မတူတရားမှာ။ ရုံးချိန်းတစ်ခု တစ်ခုစီမှာ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်မနဲ့တောင်သူတွေသွားဝန်းရံကြတာ။ ကျွန်မတို့ အဲဒီကုမ္ပဏီကိုနိုင်ခဲ့တယ်။ လူကြီးတွေလည်း ဆင်းကြည့် တယ်။ ကုမ္ပဏီမှားတယ်ဆိုတာလည်း သိသွားတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ “ ပြည်သူတွေ မနစ်နာအောင် ဖြေရှင်းပေးပါ” ဆိုပြီးစာထုတ်ခဲ့တယ်။ တောင်သူတွေကလည်း မြေပဲပြန်လိုချင်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ မြို့နယ်မြေ စာရင်းက တောင်သူတွေနဲ့ဆင်းတွေ့ပြီး လျော်ကြေးယူမလားမေးတော့ တောင်သူတွေက မယူဘူး ပြောတယ်။ တောင်သူတွေက မယူဘူးပြောပေမယ့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဆီရောက်တော့ ဒီမြေတွေရဲ့ပေါက်ဈေးက တစ်ဧကကို နှစ်သိန်းပဲရှိတယ်ဖြစ် သွားရော။ ဒီလိုနဲ့ လျော်ကြေးငွေကိစ္စကို အုပ်ချုပ်ရေးက တင်သွားလိုက်တာ။ ကြားထဲမှာ ကျွန်မတို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေနဲ့ဆိုတော့ အဲဒီဘက်ကို မလှည့်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အထိ အဲဒီမြေယာလျော်ကြေးတွေကို မပေးလျော်ရသေးဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်မ လွှတ်တော်မှာပြောတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း အရမ်းခက်ခဲကြပ်တည်းနေကြပြီ။ တချို့ကလည်း လျော်ကြေးပဲယူတော့မယ် ဖြစ်ကုန်ပြီ။ အဲဒီမှာ ငွေယူမယ့်အဖွဲ့နဲ့ မြေယူမယ့်အဖွဲ့ဆိုပြီး နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ တကယ်မြေယာလျော်ကြေးပေးမယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျတော့ သူတို့သိမ်းထားတဲ့မြေဧကနဲ့ သူတို့လျော်မယ့်ဧက မကိုက်ပြန်တော့ဘူး။ မကိုက်တော့ တောင်သူတွေက ကျွန်မဆီစာတင်ပြန်ရော။ ဘယ်လိုမကိုက်သလဲဆိုတော့ ဦးအိုက်ရုံဆိုတဲ့သူမှာ မြေ (၁၀) ဧက အသိမ်းခံထားရတယ်ဆိုပြီးတင်ပြထားတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်း သူ့မြေက (၁၀) ဧကနီးနီးရှိတယ်။ တကယ်လျော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ ၂၀၁၅ Google Earth အရဆိုပြီး မြေကို (၂) ဧကပဲ ပြထားတယ်။ ဒီ Google Earth ကိုဘယ်ကရသလဲလို့ ကျွန်မက မြေစာရင်းကိုမေးတော့ ကုမ္ပဏီကပေးတာတဲ့လေ။ အဲဒါနဲ့ ဒီမြေစာရင်းရုံးကထုတ်ပေးထားတဲ့ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ၁၀၅ ကို ဦးအိုက်ရုံဆီက တောင်းကြည့်တော့လည်း (၁၀) ဧကပဲ။ ဒါဆိုတော့ ဒီ Google Earth ဆိုတာ မဟုတ်တမ်းတရား လုပ်ထားတဲ့ဟာ ဖြစ်မနေဘူးလား။ အဲဒီလိုရှင်းမယ်ဆိုရင် ကျွန်မမှာ အထောက်အထားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်ထိ မြေပြင်မှာ အဖြေမှန်မရဘူးလေ။ ဒါလား သမ္မတလမ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာတယ်ဆိုတာ။ ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့က လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ဆက်စပ်မေးခွန်း မေးဖို့ရှိသလားဆိုတော့ အဖြေမှန်မရနိုင်လို့ တင်ပြရုံပဲတင်ပြတာပါလို့ ပြောခဲ့လိုက်တာ။
Tags: တိုင်းရင်းသား, ပြည်သူ, မြေယာ, ရှမ်းပြည်နယ်, လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်, ဝန်ကြီး, အစိုးရ, အမျိုးသမီး